Famaritana fohy momba ny Thinking and Destiny - The Word Foundation
Famaritana fohy momba ny Thinking and Destiny
Famaritana fohy momba ny fisainana sy ny faniriana
Raha ny valinteninao dia ny hahazoana fahatakarana bebe kokoa momba ny tenanao sy izao tontolo izao izay iainantsika; raha toa ka takatrao hoe nahoana isika no eto an-tany ary inona no miandry antsika aorian'ny fahafatesana; Raha fantatrao ny tena tanjon'ny fiainana, ny fiainanao, Fisainana sy faniriana dia manome fahafahana anao hahita ireo valiny ireo. Ary maro hafa.
Ao anatin'ireo pejy ireo, ny fampahalalana efa antitra toy ny tantara voarakitra dia ampahafantarina amin'izao tontolo izao-momba ny fahatsiarovan-tena. Ny hasarobidin 'izany dia ny manampy antsika hahatakatra tsara ny tenantsika, izao tontolo izao. . . ary ankoatra. Ity boky ity dia tsy fotopampianarana izay hilaza aminao ny fomba hiainana ny fiainanao. Milaza ny mpanoratra fa ny lesona manan-danja ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay dia ny mamaritra ny maha-izy azy ny zavatra tokony hatao sy ny tsy tokony hatao. Hoy izy: "Tsy maniry ny hitory amin'olona aho; Tsy mieritreritra ho mpitory teny na mpampianatra aho. "
Na dia nosoratana ho an'ny olon-drehetra aza ity asa goavana ity dia vitsy monja manerana izao tontolo izao no nahita izany. Saingy mihodina ny onja rehefa mikatsaka bebe kokoa ny hevitry ny fanamby ho an'ny tena manokana sy maneran-tany isika, ary ny fanaintainana sy ny fijaliana izay matetika miaraka amin'izy ireo. Ny fanirian'ny mpanoratra no nahatonga izany Fisainana sy faniriana manompo ho toy ny hazavana manazava mba hanampiana ny olona rehetra mba hanampy ny tenany.
Na ny mpamaky mora foana sy ny mpikatsaka fatratra ny fahalalana lalina dia tsy afaka manampy fa ho talanjona amin'ny harena, ny habaka ary ny antsipiriany momba ireo lohahevitra resahina ato amin'ity boky ity. Maro no manontany tena hoe ahoana no nahazoan'ny mpanoratra ny vaovao. Ny fomba mahazatra nanamboarana ity sangan'asa ity dia nofaritana tao amin'ny sasin-tenan'ny mpanoratra sy ny Word After.
Nanomboka nanasongadina ireo toko i Percival Fisainana sy faniriana Taorian'ireo traikefa momba ny hazavana mahery vaika, izay nolazainy fa mahatsiaro ny fahatsiarovan-tena. Nilaza izy fa ny fahatsiarovan-tena ny fahatsiarovan-tena dia manambara ilay "tsy fantatra" ho an'ilay olona tena nahatsiaro tena. Ireo traikefa ireo dia namela ny Percival mba haka fahalalana momba ny lohahevitra iray amin'ny alalan'ny fomba manokana hifantohana, na izay antsoiny hoe "fisainana marina". Tamin'ny alalan'io fomba io no nanoratana ny boky.
Misy ny maha-azo itokiana ny fanoratan'i Percival satria tsy misy ny fanombatombanana, ny teoria na ny fihoaram-pefy. Ny fanoloran-tena tsy mety ataony amin'ny fomba amam-pahamarinana ambony indrindra dia tsy milamina mihitsy. Ity no boky iray miresaka amin'ny faniriana amin'ny fo manontolo ny olona hahafantarana ny maha-olombelona ny maha-olombelona azy. Fisainana sy faniriana dia fifanakalozan-kevitra tsy dia mahazatra loatra izay mahafaoka ny maha-tanteraka ny tontolo miseho sy tsy misy porofo; Amin'ny maha-izy azy, dia azo ampiharina amin'ny fiainan'ireo rehetra izay mahafantatra ny hafatra manafaka.